मान्छे वर्ष हजारौं लागि पैसा प्रयोग गर्नुहोस्। यो लामो समयमा, मौद्रिक प्रणाली धेरै परिवर्तनहरू भइरहेको छ। को XIX सताब्दी मा भुक्तानीको माध्यम सधैं materializes थियो भने, बीसौँ शताब्दीमा, पैसा (मुद्रा को प्रकार तल छलफल) अस्तित्व छैन मात्र रूपमा सामाग्री वस्तुहरु आउनुभयो।
सुरुमा, पैसा सिक्का को रूप मा आए, र यो पुरातन समयका थियो। भुक्तानीको हालतमा यस प्रकारको परिसंचरण बाहिर छैन अझै पनि छ। पछि, धातु पैसा को प्रतिस्थापन लागि कागज आविष्कार गरेका थिए। तर संप्रदाय प्रयोग गरेर विस्थापित सिक्का पूरै बन्द। लामो समय को लागि तिनीहरूले मुख्य थिए पैसा प्रकारका, समानान्तर मा अस्तित्व जो।
आज, त्यहाँ भुक्तानीको हालतमा नयाँ प्रकार छन्, तर तैपनि टिप्पणीहरू र सिक्का प्रयोग बाहिर छैन। तिनीहरूले अझै पनि पर्स र साधारण मान्छे को pockets भर्न जारी।
आजकल, धातु सिक्का कागज टिप्पणीहरू, इलेक्ट्रोनिक र, प्रयोगमा छन् क्रेडिट पैसा। भुक्तानीको माध्यम को विकल्प धेरै विविध छ, तर आफ्नो आधारभूत सार अपरिवर्तित रहन्छ।
आज पैसा के प्रयोग गर्ने? वित्तीय बजार को पैसा विशेषज्ञहरु को प्रकार4भागमा विभाजन गरिएको छ:
सुरुमा, पैसा वास्तविक र प्राकृतिक रूपमा समुदायमा देखा पर्नुभयो। त्यो छ, आफ्नो कार्य अरू वस्तुहरू लागि विनिमय एक उपाय रूपमा सेवा सक्ने केही सामान गरियो। वस्तु पैसा मान्छे को कम्पनी मा एक निश्चित मूल्य भइरहेको पशु खाल, गोले, मोती, र धेरै, हुन सक्छ। प्रकृति मा एक धेरै ठूलो विविधता - यो कोमल एक drawback थियो।
सिक्का निम्न यस्तो कमीकमजोरी को devoid, तर पनि वस्तु पैसा सम्बन्धित देखियो। सुरुमा, तिनीहरूले सुन, चाँदी र अन्य धातु बनेको थियो। तिनीहरूले पगाल्न सजिलो हो र यस्तो आभूषण रूपमा, तिनीहरूलाई को बनाउन।
आज वस्तु पैसा प्रकार अवस्थित। उदाहरणका लागि, जेलमा जस्तै पैसा भुक्तानीको एक माध्यम रूपमा अभिनय, चुरोट छलफल गर्न सकिन्छ।
अर्को वर्ग - पैसा प्रदान। यो वर्ग पैसा को प्रकार उत्पादनहरु (प्रमाणपत्रहरू, संकेत), बहुमूल्य धातु को एक निश्चित रकम लागि साटासाट हुन सक्छ जो छन्। तिनीहरूले मोलतोल वा representational भनिन्छ। वास्तवमा, तिनीहरू भुक्तानीको माध्यम को व्यापार को प्रतिनिधिको छन्।
त्यहाँ आफ्नो प्रारम्भिक उपस्थिति को स्थान पुरातन Sumerians थियो कि एक सिद्धान्त छ। त्यहाँ माग वास्तविक जनावर मा व्यापार गर्न भेडा र बाख्राको को जलेको माटो मूर्तिहरु आए।
तिनीहरूले धातु सिक्का केही मात्रामा ग्रहण सम्म हामी सुरुमा पैसा को प्रावधान र बैंकनोट्स विचार गर्नुहोस्। आज, सुन मानक रद्द भएको छ। आफ्नो नाम संरक्षित छ हुनत कागज पैसा, एक प्रतीकात्मक पैसा छ।
अन्वेषक मार्को पोलो को XIII शताब्दीमा युरोप चीन देखि ल्याए, कागज पैसा पहिले नै चिनियाँ द्वारा शताब्दीयौंदेखि प्रयोग गरिएको छ भन्ने समाचार। समयमा यूरोप प्रयोगमा मात्र सिक्का थिए। मात्र पछि युरोप मा3शताब्दी मा व्यावहारिकता र द्वारा सुन सुरक्षित बिल को सुविधा सेवा बुझ्छु।
टोकन पैसा भनिन्छ अर्को fiantnye पैसा मा वास्तविक छैन, कागज आदेश दिए। भुक्तानी यस हालतमा मूर्त केहि द्वारा समर्थित छैन, तर सामान र सेवाहरू लागि भुक्तानी रूपमा स्वीकार गरिएको छ। Fiatnymi सबै गैर-नगद र इलेक्ट्रोनिक पैसा, साथै बैंक खाता मा झूट उपकरण, र हाम्रो pockets र पर्स मा कागज पैसा हो। केही अनुसन्धानकर्ताहरूले चाँडै मान्छे कागज पैसा प्रयोग गर्न बन्द हुनेछ भन्ने धारणा हो।
आज धेरै मानिसहरू cashless रुचि भुक्तानी विधि। यो मात्र होइन कार्ड, तर पनि प्रयोग इलेक्ट्रोनिक पैसा प्रकारका, भर्चुअल पर्स मा संचित जुन।
त्यहाँ ऋण बस्न रुचि मानिसहरू एक निश्चित वर्गमा छ। क्रेडिट पैसा - सायद तिनीहरूलाई लागि यो भुक्तानी अर्को हालतमा सिर्जना गरिएको थियो। पैसा को यो वर्ग को प्रजाति वास्तवमा सजाया ऋण एक निश्चित तरिका प्रतिनिधित्व गर्छ। तिनीहरूले अलग हेर्न सक्छ। क्रेडिट कार्ड, चेक वा promissory टिप्पणी छ। ऋण को रूप मा पैसा आज साधारण जारी र सामान र सेवाहरू लागि नगद displacing, व्यावहारिक सबैतिर भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिन्छ। peril र मनोवैज्ञानिक जाल संग fraught हालतमा यस प्रकारको। यसले कुनै पनि रकम मा खाता पैसा लिन, तर सबैलाई छैन व्यवस्थापन गर्न तिनीहरूलाई फिर्ता सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
पैसा को विकास - धेरै रोचक विषय। भविष्यमा के हुनेछ, समय भन्नेछु। भुक्तानी र fiatnye आफ्नो प्रतिस्थापन र पैसा उधारो भौतिक साधन को लापता प्रयोगमा अझै पनि एक लामो समय, कागज टिप्पणीहरू र सिक्का भविष्यवाणी छन् हुनत र आफ्नो स्थान हात छैन।
RSI सूचक - कसरी प्रयोग गर्ने? निर्देशन, निर्देशन
सुक्खा सफाई विवाह पोशाक: यो लायक छ?
तीव्र र क्रोनिक prostatitis। कारण र prostatitis को लक्षण
एक मानिस कहिल्यै माया रोक्न दिनेछ 8 संकेत
घटनाहरू एक harbinger रूपमा डाह: सपना व्याख्या